ATK’s Previous Books – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Lettwè Baw Books of Atta Kyaw
Discussions on questions posed by young men all over the country, covering sexual, social, and psychological issues.
ယောက်ျားပျိုတို့ သိချင်တတ်မြဲ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
Burmese version of How Compatible Are you?
လင်မယားများ လက်ကိုင်ထားရမယ့် စာအုပ်လို့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လောက် အကြောတည့်လဲ၊ ဘယ်လောက် အကြောတည့်ချင်ယောင်ဆောင်နေကြလဲဆိုတာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်လာလိမ့်မယ်။
Livable Life, Clear Conscious and A Peaceful Mind
A compilation of uplifting tales from all over the world. Though they are translated,areader may not feel foreign to the stories for the style of writing and translation is very personal and descriptive.
အတ္တကျော်ရေးပြီးသမျှ စာအုပ်ထဲမှာ ရောင်းအကောင်းဆုံး စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဖတ်ရုံသာမက ချစ်သူ ခင်သူတွေကို လက်ဆောင်ဝယ်ပေးလိုက်တာ ဘယ်နှအုပ်တောင်ရှိပြီလို့ ပြောတဲ့သူတွေ အလွန်များတဲ့ စာအုပ်ပါ။
It’salittle gift book of various quotes about friends in English and Myanmar languages. If you haveaspecial friend, and if you do love friends, you will really love this book, too.
သူငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဆိုအမိန့်တွေကို အင်္ဂလိပ်မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ ဖော်ပြထားတာပါ။ သုံးတတ်သူများအတွက် အကျိုးရှိမယ့်စာအုပ်ပါ။
For Baby-girls To Learn
Major groundbreaking book on sex education for girls. It also deals with ways to prevent sexually transmitted diseases, pregnancy, and various kinds of abuses against girls.
A MUST READ FOR GIRLS!!!
မိန်းကလေးတိုင်း အလွတ်ကျက်ရမယ့် ပြဌာန်း စာအုပ်
A book on etiquette and manners. MRTV4 ကျေးဇူးကြောင့် ထွက်ပြီးတာ အတော်ကြာမှ ၀က်ဝက်ကွဲ ထပ်ရောင်းကောင်းသွားတဲ့ စာအုပ်။
One & only novel of Atta Kyaw. Let’s Share the Same Dream Before the morning Breaks!
အတ္တကျော်ရဲ့ တစ်အုပ်တည်းသော ၀တ္ထုရှည်
A book for those feeling unhappy.
အင်မတန်ရောင်းကောင်းတဲ့စာအုပ်ထဲက နောက်တစ်အုပ်ပေါ့။ (ကြွားရင် ကြွားတယ်လို့ မှတ်ပါ တကာ၊ တကာမအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့)
A satirical travelogue.
ဖတ်ရင်း ပြုံးရယ်ရမယ့်စာအုပ်။ ရှားရှားပါးပါး မင်းလူရဲ့ အမှာစာနဲ့။
A fourth compilation of uplifting stories.
Essentials for management and career
အလုပ်အကိုင်နဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးထားတယ်
For Women to Keep
Stories from Khin Hnin Yu’s Heart
စာရေးဆရာမကြီး ခင်နှင်းယုရဲ့ ၀တ္ထုတို တချို့ကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ စာအုပ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ “မသိင်္ဂီ”က ပြန်ဆိုပေးပါတယ်။
Autobiography series of Two-time Academy Award Winner Director and Writer Maung Wunna
For Sonny-boys To Understand
Major book on sex education for boys, first ever in Myanmar. Praises of readers all over the country, including venerable Buddhist monks, on this book can be found in the last section of its sequel: “For Baby-Girls to Learn.”
ဒါက ယောက်ျားလေးမှန်ရင် အလွတ် ကျက်ရမယ့် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပေါ့။
The book of essays on various topics ranging from jealousy and civilised attitudes to love and death. Your own insights will be invoked after reading
each and every article in this book.
တွေးစရာတွေ အများကြီး ခင်းပြထားတဲ့စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
Superb translation of one of the world’s long standing classics. The original prose was really poetic and touchy while the translation itself reflects not only the message but also the taste of the original.
ယနေ့ထက်တိုင် ရောင်းအကောင်းဆုံး စာရင်းဝင် ကမ္ဘာ့ဂန္တ၀င်ကြီးပါ။
Women’s handbook on dealing with pre and peri menopause through alternative medicine, especially for Myanmar women. Included an interview with Myanmar traditional herbal specialist who advises dietary measures to successfully overcome this critical stage of life.
မမကြီးတွေ ဖတ်ရမယ့် စာအုပ်ပေါ့။
Don’t You Ever Try To Challenge My Mind!
A translation of psychometric tests,
modified by the translator to suit the lives of Myanmar peoples. You can test how miserly you are, how easy you can get frightened, or how generous you actually are.
ကိုယ်ဘယ်လောက် သဘောထားကြီးလဲ၊ ကြောက်တတ်သလဲဆိုတာတွေ ကိုယ့်ဘာသာ ဆန်းစစ်နိုင်စေမယ့် စာအုပ်။
Cry of the Cat by R. L. Stine
Translation ofachildren book for Myanmar children. Though it is a
translated version, children of Myanmar will read it as if it were
originally written in Myanmar language. They don’t feelasingle trace of foreign story.
Translation of selected essays fromabook written byavery influential Singaporean writer Mr. Kishore Mahbubani, who have been informed of the existence of his essays in Myanmar language. Very controversial points of view, butamust read for all Asians, including Myanmars.
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်ချစ်ရင် ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်ပါ။
Where Are We Scuttling For?
The Third compilation of uplifting tales from all over the world. Looking back into one’s past, he may find himself scuttling for nothing but his own ego, forgetting what he has always loved to do and to be with.
Everyone has to ask himself or herself, “Where am I scuttling for?”
မောဟပြေပုံတိုပတ်စ အမှတ် ၃ ဖြစ်ပါတယ်။
Little Thoughts of Relief
A compilation of essays on new perspectives, new ideas and new ways of thinking. After reading each and every article,areader will rest forawhile and think it over for himself.
ဖြေပြီး တွေးတတ်ရင် လောကကြီးက ထင်သလောက်ဆိုးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
A compilation of interviews with teenagers all over the country. At
the end of each interview, the writer makes comments on the interview and
discusses various issues. If you haveateenager, or if you areateenager, you should read this book. It is the first of its kind in Myanmar.
The Art of Parenting (Second Edition)
Myanamar’s very first book on child psychology and parenting, written inavery colloquial language and discussed inafriendly way with personal touches of the author.
One of the best-sellers
.မိဘနေရာကို တက်ယူထားသူများ လက်ကိုင် ထားရမယ့် မိဘလုပ်နည်း စာအုပ်ပါ။
A compilation of short stories since 1975. All short stories are based on
true stories experienced by the author. Witty recounts of his younger days.
At the end of each story, there isashort note describing how the story has developed.
၁၉၇၅ခုနှစ်က စပြီး ကနေ့အထိ ရေးခဲ့သမျှ ကိုယ်တိုင်ကြုံဝတ္ထုတိုတွေဖြစ်ပါတယ်။
A Musical Instrument Called Life
The Second compilation of uplifting tales from all over the world. Life
is likeamusical instrument: what you get out of it depends on how you play
it. Another best-seller.
မောဟပြေ ပုံတိုပတ်စ ဒုတိယတွဲပါ။
Ways To Stay Married Through Fights
Couples’ handbook covering critical topics ranging from getting married
to runningahappy married life. Even if you are thinking about divorce, this book will help you through your decision-making process. If you are married, you should keep this book as your bible. It is again the first of its kind in Myanmar as well as one of the best-sellers.
ရည်းစားထားရာမှသည် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ အထိ၊ ချစ်ခင်စွာ ရန်ဖြစ်နည်း အပါအ၀င် ကွာရှင်းပြတ်စဲလိုစိတ်များ တဖွားဖွား ပေါက်လာတဲ့အခါ ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မယ် ဆိုတာများအတွက်ပါ ပါဝင်ပါတယ်။
Hundreds of Miles On A Red Bluebird
Unusual travelogue ofajourney of the author to Sino-Myanmar border.
Throughout the trip the author will occasionally take you to his long journey back into the past.
မူဆယ် ခရီးသွားမှတ်တမ်းပေမယ့် စာရေးသူရဲ့ အတိတ်ခရီးကိုပါ ပြန်သွားထားပါတယ်။
20 thoughts on “ATK’s Previous Books”
7 September 2009 at 12:28 pm
ဆရာရဲ့ နေပျော်တဲ့ဘ၀၊ ကြည်မြတဲ့ဘ၀င်၊ ရွှင်လန်းတဲ့စိတ်ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
နှစ်ကြိမ်ဝယ်ပြီး သူငယ်ချင်းများကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ ကြုံကြိုက်တိုင်း တခြားသူတွေကို ပြောပြပါတယ်။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ အဲဒီစာအုပ်ကိုdownload လုပ်ရာမှာ အခက်အခဲကြုံနေသဖြင့် အီးမေးလ်မှ ပေးပို့နိုင်လျှင် ကျေးဇူးပြု ပို့ပေးစေလိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီဘလော့ကို ကျွန်တော့် ဘလော့တွင် link တွဲပြီး သုံးခွင့် ရှိ/မရှိ သိပါရစေ။
7 September 2009 at 6:29 pm
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။ အဲဒီ့စာအုပ်ကို download လုပ်နိုင်တာက Forever နဲ့ သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့်ဆီက စာအုပ်တချို့ (စိတ်ထင် “သက်ငယ်စကား” အထိ) ယူထားပါတယ်။ သူတို့ကို ပေးထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်မှာ ပေးပိုင်ခွင့် မရှိဘူး ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အဲ… ပြီးတော့လည်း ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီ့စာအုပ်ရဲ့ PDF file လည်း မရှိတာ တစ်ကြောင်းပေါ့။ အဲဒီ့အတွက် ကျွန်တော့်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လင့်(ခ်)ကို promote လုပ်ပေးတာမျိုးတော့ဗျာ… ကျွန်တော်က ၀မ်းပန်းတသာ၊ ကျေးဇူးတတင် လက်ခံရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။
22 October 2009 at 6:11 pm
ကျနော်..မင်ဘာလုပ်ချင်လို့ ပါ..ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲ။ဒီဆိုဒ်ကို..ရိုးရိုးဝင်လို့ မရပါဘူး။ကျော်ပြီးမှ..၀င်လို့ ရပါတယ်။
26 October 2009 at 3:04 pm
အဲဗျ… အဲဒါ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း ကျွန်တော် မသိပါ။ Gmail ရဲ့ Reader က တစ်ဆင့် လုပ်လို့ ရတယ်လို့တော့ ကြားဖူးပါတယ်။ (သိသူများရှိရင် တစ်ဆိတ် ပြောပြပေးကြပါနော်။) ရိုးရိုးဝင်လို့ မရဘဲ ကျော်ပြီးမှ ၀င်လို့ရတယ်ဆိုတာလည်း တချို့က ပြောပါတယ်။ ၀င်ရတာ သိပ်အခက်အခဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် http://lettwebaw.mylovecafe.com ကို ၀င်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျော်စရာ မလိုပါဘူး။ တန်းဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ သည် ဘလော့(ခ်)ရဲ့ မူပွားမို့ သည်ဘလော့(ခ်)ကို အသစ်တင်တိုင်း အဲဒီ့ဘလော့(ခ်)မှာလည်းပဲ အသစ်တင်ပေးနေစမြဲပါ။
အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပြီး ဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါ။
wordpress က ning တို့လိုမျိုး Social website မဟုတ်ပဲ Blogger တို့လို blog ဆန်ဆန်ဖြစ်တာကြောင့် မန်ဘာလုပ်လို့မရနိုင်ပါ. လို့ သိထားပါတယ်။အကယ်လို့ ရရင်တောင်မှ ISP က ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင် ဘာမှမထူးပါဘူး….။
ultra surf ဆော့ဝဲလ်ကိုသုံးပြီး ကျော်ကြည့်ပါ။
https://www.xroxy.com/proxylist.php?port=&type=&ssl=&country=TW&latency=&reliability=#table ပထမဟာမရရင်အဲဒီက proxy တစ်ခုခုသုံးကြည့်ပါ။
13 January 2010 at 7:10 pm
သမီးကဆရာ့ပရိသတ်တယောက်ပါ…ဆရာ့ရဲ့ “သားဆက်ခြားနည်းဆိုင်ရာနည်းအဖြာဖြာ” ဆိုတဲ့ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကို လုံးချင်းထုတ်ဖို့ ရှိလား သိချင်လို့ပါဆရာ..
14 January 2010 at 1:21 am
အစကတော့ လုံးချင်းထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှက်သိက္ခာအင်မတန်မှ နည်းလှပါတဲ့ မဟာပညာကျော်တစ်ဦးက ကျွန်တော်ကိုးကားတဲ့ စာအုပ်ကိုပဲ အစအဆုံး ပြန်ယူ၊ ကျွန်တော့် ရေးဟန်ကို ကူးချပြီးသကာလ ကျွန်တော်က “သားဆက်ခြားခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ အဖြာဖြာ”လို့ ရေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ “သားဆက်ခြားနည်းအဖြာဖြာ”ဆိုပြီး ဆင်တူရိုးမှား အတုအပ ပြုလုပ်ကာ ဦးအောင် ထုတ်ချလိုက်တာမို့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ မထုတ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အခု comment ၀င်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော် ပြန်စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပရိသတ်က သတ်သတ်ပါ။ အဲဒီ့ပရိသတ်အတွက် အရှက်မရှိတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ မလဲသင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။ အဲလို စဉ်းစားတဲ့အခါ ထုတ်ချင်လာပါတယ်။ သို့သော် နည်းနည်းတော့ ကြာမယ်ပေါ့ဗျာ။ လောလောဆယ်မှာ “မိန်းမသားတို့ သိမ်းထားဖို့”ကို ပုံနှိပ်နေပါပြီ။ ဖေဖော်ဝါရီထဲမှာ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါပြီးရင် တခြားတစ်အုပ် ရှိနေပါသေးတယ်။ “ပင့်ကူအိမ် မှတ်တမ်း”ပါ။ အဲဒီ့နောက်မှာလည်း တခြားစာအုပ်လေးတွေ ထုတ်ဦးမှာမို့ “သားဆက်ခြား”က နည်းနည်းလေး ကြာမယ်ထင်တယ်။ ထွက်တော့ ထွက်လာမှာပါ။
nan yi yi nay tun says:
7 August 2010 at 4:16 pm
ဖေကြီးရဲ. ကုန်နေပြီလို. ရေးထားတဲ.စာအုပ်တွေ (ချစ်သူငယ်ချင်းအတွက် ၊ တွေးတောဆင်ခြင်မှုအနုပညာ)ကို မ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်လိုက်လို. ၀ယ်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ အဲ.ဒါအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ထပ်ထုတ်ပေးဖို. တောင်းဆိုပါတယ်။
ပြီးတော. “မိန်းမသားတို. သိမ်းထားဖို.” မှာ မိန်းကလေးတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆုံးမထားသလိုမျိုး နောက်တစ်အိုးတစ်အိမ်ထူချင်နေတဲ. အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားတွေကိုလည်း ဆုံးမတဲ.စာမျိုး ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
ဖေကြီးရဲ. မောစပြေစာအုပ်တွေ အရမ်းကောင်းပါတယ်။မောစပြေတွေကတော. တစ်အုပ်မှမလွတ်သေးပါဘူး။
ဖေကြီးတို.မိသားစု ထာဝရ အေးချမ်းသာယာပါစေ။
15 July 2011 at 7:43 pm
ဆရာ စာအုပ်တွေက ဘယ်မှာဖတ်ရသလဲ ၀ယ်ရတာလည်း ကျွှန်တ်ာတို့ဆီမှာကမရဘူးလေ
Mg Mg Soe says:
11 August 2012 at 9:37 am
ဆရာ ခင်ဗျား…ဆရာစာအုပ် တွေကို မြင်သာ မြင်ရမကြင်ရဆို သလို့ download link ကိုရှာမတွေဖြစ်နေပါတယ်…ကျွန်တော်ဆီမှာ Connection ကတော်တော် ကောင်းပါတယ်..link မတွေ့တော့ ဆွဲမရဖြစ်နေပါတယ်..အပန်းမကြီးရင် link လေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြစေချင်ပါတယ်..
11 August 2012 at 9:49 am
သည်မှာ Some Electronic Copies (ebooks) of My Published Books ကြည့်လိုက်ရင် တချို့ကို ရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
13 August 2012 at 12:10 am
ဆရာရေ အဆင်မပြေသေးပါဘူး…This content is currently unavailable
Return home……ပေါ်နေတယ်.. ဆရာကို ဂျီတိုက်ရတာများနေတော့အားနာလှပါပြီ….
14 August 2012 at 12:33 pm
ဟုတ်ကဲ့… ခဏ စောင့်ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော် အချိန်ပေးနိုင်တဲ့အခါ သည်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်။ စာအုပ် အဖုံးလေးတွေကို နှိပ်လိုက်ရင် ebook download link ဆီ ရောက်သွားအောင် ပြင်မှာပါ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် မအားလှသေးလို့ နားလည် သည်းခံပေးပါခင်ဗျား။
23 August 2012 at 11:19 pm
ဆရာကျွန်တော်ကတော့အခုမှ ဆရာ့ရဲ့ဆိုဒ်ကိုတွေ့တာပါ ဆရာရေးထားတာတွေတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကစာလဲသိပ်များများမဖက်ဖူးပါဘူး။ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖက်ပြီဆိုရင်လဲမပြီးမချင်းထိုင်ဖက်တက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခုကတော့ တန်ဖိုးဆိုတဲ့အရာကိုပါ လူတွေအတော်များများမှာ တန်ဖိုးဆိုတဲ့အရာကိုမသိကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လူတွေကိုမေးဖူးပါတယ် ကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ရှိလားလို့မေးဖူးပါတယ်။ လူအတော်များများကတော့ တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာမရှိဘူးတဲ့ သူဟာနဲ့သူတော့တန်ဖိုးရှိကြတာပဲတဲ့။ ကျွန်တော်အဲဒီ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့အရာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ လူတော်တော်များကတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာမရှိဘူးလို့ပြောပြီး။ ဘာလို့တန်ဖိုးကိုမသိတာလဲဆိုတာကျွန်တော် စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲတန်ဖိုးဆိုတဲ့အရာကိုသိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ဆရာ ကျွန်တော်ရေးတဲ့အထဲမှာ ဆိုက်ကို လိုဖြစ်နေမလားမသိ။ ကျွန်တော်တော်တော်လေးသိချင်နေလို့ပါ အခုဟာကလူတော်တော်များများမှာအလိုဖြစ်နေတာကိုတွေ့လို့ပါ။ နောက်တစ်ခု ကျွန်တော့ကိုယ်ကျွန်တော်လူထူးစမ်းလို့ပဲပြောရမလားမသိ။ ကျွန်တော်သူများတွေမလုပ်နိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုလဲလုပ်ဖူးပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ချို့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးသိနေပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော့အရှေ့ကနေဆိုင်ကယ်မောင်းသွားတဲ့လူတစ်ယောက် အဲ့ဒီ့လူဆိုင်ကယ်မှောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကြိုပြီးသိနေတယ်။ ပထမတော့ကျွန်တော့လိုပဲသူများတွေလဲဒီလိုဖြစ်ဖူးမယ်ထင်တာ ကျွန်တော်ကခနခနကိုသိနေတယ်။ အဲလိုဖြစ်မယ့်သူတွေကိုကျတော့ကျွန်တော်သွားပြောဖို့နုတ်ကမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်အခုလိုဖြစ်တာကိုသူများတွေကိုသွားပြောရင်လဲယုံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့ကို တစ်ခါယုံသွားတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့နှစ်ယောက်ကဘယ်လိုယုံသွားလဲဆိုတော့ သူတို့အရှေ့မှာပဲကျွန်တော်မိုးနှစ်ခါတားဖူးတယ်။ ပထမတစ်ခေါက်မှာတော့သူတို့မယုံကြဘူး။ ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတစ်မြို့လုံးမိုးတွေရွာနေတာ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာ မိုးလုံးဝမရွာဘူး။ ဆိုင်ကယ်သွားနေတဲ့ အရှေ့ကော အနောက်ကောမိုးတွေသဲသဲမဲရွာနေတာ ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ထိ မိုးလုံးဝကိုမဆိုဘူး ဆရာ။ နောက်ထက်ဖြစ်ပျက်တာတွေလဲအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်အခုရေးထားတာက ကျွန်တော့ဘ၀ မှာကြုံတွေ့ခဲ့တာတွေရေးထားတာပါ တစ်ခုမှလိမ်ညာထားချင်းမရှိပါဘူး။ ဆရာကျွန်တော့စာကိုဖက်လို့ခေါင်းစားသွားရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။ ကျွန်တောအဒိကသိချင်တာကတော့ တန်ဖိုးဆိုတဲ့အရာကိုသိချင်တာပါ။ အဲ့ဒါသိရရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီ။ ဒီဆိုဒ်ကိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ဆရာ့ကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်။
6 July 2013 at 2:34 pm
တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးဖူးပါတယ်။ `တွေးတော ဆင်ခြင်မှု အနုပညာ စာအုပ်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ တစ်ဆိတ် ရှာဖတ်ကြည့်ပေးပါလား။ လောလောဆယ် ကျွန်တော် မအားလို့ ဘလော့(ဂ်)မှာ တင်မပေးနိုင်တာကို နားလည် သည်းခံပေးပါခင်ဗျား။
Khant Lwin Htoo says:
4 September 2012 at 8:23 pm
ဆရာရေ ဆရာ့ စာအုပ်တွေက Download လုပ်ဖို့ သားကိုလမ်းညွှန်ပေးပါဦးခင်ဗျ။
su myat says:
13 February 2013 at 1:51 pm
download လုပ်ချင်လို့ပါ ဆရာ နည်းလမ်လေး လမ်းညွှန်ပေးပါနော် တချို့စာအုပ်တွေက မိန်းကလေးတွေ အပြင်မှာ ၀ယ်လို့မကောင်းလို့ပါ
28 June 2013 at 8:20 pm
download လုပ်ချင်လို့ပါ ဆရာ နည်းလမ်လေး လမ်းညွှန်ပေးပါနော် တချို့စာအုပ်တွေက အပြင်မှာ ၀ယ်လို့မကောင်းလို့ပါ
6 July 2013 at 1:02 pm
တချို့စာအုပ်တွေက အပြင်မှာ ၀ယ်လို့ မကောင်းလို့ပါဆိုတဲ့ စကားကို သဘောကျတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က အပြင်မှာ ၀ယ်လို့ မကောင်းတဲ့ စာမျိုးတွေကို ရေးနေတဲ့သူ ဖြစ်သွားရှာပေတော့တာကိုး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို သြဘာပေးတဲ့အတွက်။ ဒေါင်းလုပ်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါလေ။
27 June 2013 at 4:13 pm
စာအုပ်တွေ က ဘယ်လို ဒေါင်းလုပ် လို့ ရတာလဲ မသိဘူး ဆရာ စာအုပ်လေး တွေလိုချင်လို့ ပါ